ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံသားများ ပါဝင်သော မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားလေ့လာရေးအ? - Yangon Media Group
ဂျာမနီနှင့်ဆွစ် ဇာလန်နိုင်ငံသားများ ပါဝင်သော မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားလေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဧပြီ ၁၄ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံတမူးနယ်စပ်ဂိတ်မှ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၁ဝ ရက်တာ လေ့လာလည်ပတ်ခဲ့ကာ ဧပြီ ၂၃ ရက်မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခွဲတွင် မြဝတီ-မဲဆောက်နယ် စပ်လမ်းကြောင်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့မှာ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လိုင်စင်ယူဆောင်ရွက်နေသော Traventure Travel&Tour ကုမ္ပဏီ၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဂျာမနီနိုင်ငံသား Mr.Gred Rudi Bangert အပါအဝင် ဂျာမနီနိုင်ငံ သား ၂၆ ဦးနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား ၁၅ ဦး စုစုပေါင်း ၄၁ ဦးတို့သည် ၎င်းတို့၏မော်တော်ယာဉ် ၂၂ စီးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေ့လာလည်ပတ်ရန် ရောက်ရှိလာသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
”သူတို့က မြန်မာပြည်တွင်း သင်္ကြန်ရေကစားကြတာတွေ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ တောတောင်သဘာဝရှုခင်းတွေကို အဓိကထားလေ့လာကြပြီး မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံတွေနဲ့ မတူတဲ့ရှု ခင်းတွေကို ကြည့်ပြီးသူတို့သဘောကျကြပါတယ်”ကျိုက်ထီးရိုးတက်တဲ့ရှုခင်းတွေဆို အရမ်းသဘောကျပါတယ်”ဟု ဧည့်လမ်းညွှန်ဦးသဲ ကိုကိုထွန်းက ပြောသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံခြားခရီးသွား အဖွဲ့သည် တမူး၊ ဂန့် ဂေါ၊ မုံရွာ၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ ကျိုက်ထီး ရိုးနှင့် ဘားအံမြို့များသို့ ၁ဝ ရက်တာ လည်ပတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရ သည်။
ပြည်သူပိုင် 'ဝဇီရာ' ရုပ်ရှင်ရုံကို ပြန်လည် ရယူလိုကြောင်း ပိုင်ရှင်၏ မျိုးဆက် သတင်းစာ ရှင်းလ??